Akụkọ - Banyere Agba Agba Agba
Banyere Paintless Dent Mmezi
Dent mmezimbụ ndị Germany mepụtara. Ọtụtụ ndị na-emepụta ụgbọala ejirila ụdị teknụzụ rụzie ụgbọala ndị mebiri emebi n'oge nyocha ụlọ ọrụ. A na-apụghị izere ezere na usoro nke iji ụgbọ ala. Site na ọtụtụ igwe ndị ọkpọ na ndị ọrụ mmịpụta, ndị ọkaibe nwere nkà chọrọ naanị otu awa ma ọ bụ abụọ iji rụkwaa nkụ ahụ n'elu ahụ ụgbọ ala ahụ, na-enweghị akara ọ bụla. Site na uru nke obere oge na ọnụ ala, teknụzụ a na-ewu ewu na ọtụtụ ndị nwere ụgbọ ala.
Agbanyeghị, teknụzụ nrụzigharị ụgbọala adịghị ike ebe niile. Naanị ya bụ akụkụ ahụ na-enweghị mmebi agba. Enwere ike ịrụzi ụgbọ ala ndị ejiri ígwè na aluminom rụọ. Ugbu a ụfọdụ ndị na-emepụta ụgbọala ejiri rọba siri ike dochie ígwè na aluminom iji chekwaa ego. Yabụ enweghị ihe teknụzụ a nwere ike ime.
Teknụzụ a na-ebelata oge mmezi (ihe dị ka minit 20-40 maka mmezi ezé), ma na-ebelata ọnụ ahịa (ihe dị ka 50% nke mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na agba agba). Akụkụ nke dara ada nke teknụzụ a rụzigharịrị ma gbanwee, na-eme ka ụgbọala ahụ gosipụtara ụdị nke mbụ ya ọzọ. Paintinggba sere dent idozi teknụzụ nwere ike weghachite akụkụ mbụ, mezie ngwa ngwa ahụ, chekwaa nsogbu nke mkpuchi na ụgwọ nke mpempe akwụkwọ. Ọ bụ ozi ọma maka ọtụtụ ndị nwe ụgbọ ala. Otú ọ dị, ebe ọ bụ naanị na ọ nwere ike ịrụzi nsị ahụ, enweghị ike imezi mmebi agba.